ခန္ဓာကိုယ်ကာကွယ်မှုစက်ရုံ - China ခန္ဓာကိုယ်ကာကွယ်မှုထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ
အရောင်းရဆုံး Mini Silicone L ...
LED ရှေ့လက်ကိုင်ဘီးလီ ...
စက်ဘီး ဦး ခေါင်းအလင်းရေစိုခံ ...
၇ ဦး စီးသောစက်ဘီးရှေ့မီးဆိုင် ...
အခြေခံအချက်အလက်များမော်ဒယ်နံပါတ် KS-05 အထူ - အလယ်အလတ်လက္ခဏာ: အပူနွေးပါ၊ မြင့်မားသော elastic age အုပ်စုအရွယ်ရောက်သူများ - ပစ္စည်း - Nylon၊ Nylon အရောင် - အပြာရောင်ကုန်ပစ္စည်းအမည် - ဒူးခေါင်းအမျိုးအစား - ပံ့ပိုးမှုဒူးထောက်ပံ့ခြင်းအသုံးပြုမှု - အားကစားအသုံးပြုသူများလိုဂို - စိတ်ကြိုက်အမှတ်တံဆိပ်လက်မှတ် : FDA ၀ ယ်သူ - Amazon နှင့် Ebay လုပ်ဆောင်ချက် - ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုများကိုရှောင်ပါ။ နောက်ထပ်အချက်အလက်များထုပ်ပိုးမှု - ၁ အိတ်၊ စုပ်အိတ်ထုတ်လုပ်နိုင်မှု - တစ်လလျှင်တစ်ပတ်လျှင် ၅၀၀၀၀ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး - သမုဒ္ဒရာ၊ ကုန်း၊ လေပြင်နေရာ - Hebei, China (Mainland) ထောက်ပံ့ရေးစွမ်းရည် - 50000pieces / လလက်မှတ်ရ ...
ဆန့်ခြင်းနှင့် ၀ တ်ဆင်နိုင်သော Shock Absorption Knee Pad KS-04
အခြေခံအချက်အလက်များမော်ဒယ်နံပါတ် KS-04 အထူ - အလယ်အလတ်လက္ခဏာ: ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊ ရေစိုခံ၊ နူးညံ့။ အကာအကွယ်ပေးသောအသက်အရွယ် - အရွယ်ရောက်သူများ - ပစ္စည်း - နိုင်လွန်ဇာစ်မြစ် - Hebei, China (Mainland) နမူနာအချိန် - ၁-၇ ။ FDA, ISO90001 ၀ န်ဆောင်မှု - OEM / ODM-Knee ပံ့ပိုးမှုအရွယ် - အခမဲ့အရွယ်အစား - ဒူးခေါင်းအသုံးပြုမှု - အားကစားပံ့ပိုးမှု - ဒူးပြားအရောင် - အနက်ရောင်၊ အပြာ၊ အနီ၊ မီးခိုးရောင်ကုန်ပစ္စည်းအမည်: Breathable ချိန်ညှိနိုင်သောဒူးပြားများအပိုအချက်အလက် - ထုပ်ပိုးမှု - opp အိတ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု: 10000 တစ်ပတ်လျှင်အပိုင်းပိုင်း / အပိုင်းပိုင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး: သမုဒ္ဒရာ၊
အခြေခံအချက်အလက်များမော်ဒယ်အမှတ် KS-03 အထူ: အလယ်အလတ်အင်္ဂါရပ်: နွေးနေခြင်း၊ elastic အထည်သက်တမ်းအရွယ် - အရွယ်ရောက်ပစ္စည်း - နိုင်လွန်၊ နိုင်လွန်ကုန်ပစ္စည်းအမည် - ဒူးထောင့်အမျိုးအစား - ပံ့ပိုးမှုဒူးထောက် - အသုံးပြုမှု - အားကစားအသုံးပြုသူများလိုဂို - စိတ်ကြိုက်အမှတ်တံဆိပ်လက်မှတ် - FDA ဝယ်သူ : Amazon နှင့် Ebay လုပ်ဆောင်ချက် - ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုများကိုရှောင်ပါ။ အရောင် - ၅ အရောင်များ။ နောက်ထပ်အချက်အလက်များ - ထုပ်ပိုးမှု - ၁ ခု / စက္ကန့်အိတ်ထုတ်လုပ်မှု - တစ်လလျှင် ၅၀၀၀၀ Piece / Pieces ကုန်အမှတ်တံဆိပ်: Aofeite သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး - သမုဒ္ဒရာ၊ မြေ၊ လေ၊ မူရင်းနေရာ - Hebei, China (Mainland) ထောက်ပံ့ရေး စွမ်းရည် - 500
Gym Fitness Sport Lumbar Belt ခါးကိုချုံ့ပါ WS-03
1. တင်သွင်းသောယက်ပြီးပျားလပို့မှထုတ်လုပ်နိုင်သောငါးများကိုသုံးနိုင်သောပါးလွှာပြီးသက်တောင့်သက်သာရှိပြီးမြင့်မားသော elastic ဖြစ်သည်။
2. အရည်အသွေးမြင့်သံမဏိလေးမျိုးကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အထောက်အကူပြုသည့်အခန်းကဏ္ play မှပါဝင်သည်
3. နှစ်ဆဖိအားကြိုး, ထိရောက်သောဝမ်းဗိုက်ဖိအားပေး, ခါးလုံခြုံနိုင်နေစဉ်ချွတ်ကျကြပါဘူး။
လေ့ကျင့်ခန်းအတွင်းဒဏ်ရာများကိုကာကွယ်ရန်ခိုင်ခံ့ပြီးအကြမ်းခံနိုင်သော 4.Stable support strip
ခါး Trimmer နောက်ကျောပံ့ပိုးမှု Brace WS-05
အခြေခံအချက်အလက်များ - အမှတ် - KS-02 အထူ - အလယ်အလတ်အဆင့်လက္ခဏာ - ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအသက်အရွယ် - အရွယ်ရောက်သူများ - ပစ္စည်း - Spandex, Spandex, Polyester, နိုင်လွန်နုန်း - Hebei, China (Mainland) MOQ - 10 PCS လက်မှတ်: CE, FDA, ISO90001 ၀ န်ဆောင်မှု - OEM / ODM၊ ဒူးထောက်: အရွယ်အစား: SML၊ ဒူးခေါင်းအသုံးပြုမှု - အားကစားကာကွယ်မှု၊ ဒူးခေါင်းအမှတ်တံဆိပ် - စိတ်ကြိုက်အမှတ်တံဆိပ်၊ ဒူးထောင့်အပိုအချက်အလက်များ - ထုပ်ပိုးမှု - 1pc / opp အိတ်၊ ပုံးတစ်ခုလျှင် ၃၀၀pcs၊ ၆၀ * ၅၀ * ၄၅ စင်တီမီတာကုန်ထုတ်စွမ်းအား - ၃၀၀၀၀ Piece တစ်လလျှင်သဘောင်္သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး - သမုဒ္ဒရာ၊
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း OEM ဝန်ဆောင်မှု
စက်ရုံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ & လည်ပတ်မှုအဖွဲ့အစည်းက
ထိရောက်သောတင်ပို့ & အာမခံ & ဖောက်သည်ရှင်းလင်းရေး
Body Shape ခါးပတ်လေ့ကျင့်ခန်းချွေးထွက်ခါးခါးပတ် WS-02
waistline 60-68cm အဘို့အ S ကို Tile ကိုအရှည် 27cm
ခါး 69-73cm အဘို့အ M က Tile ကိုအရှည် 27cm
waistline 73-82cm များအတွက် L ကို tile ကိုအရှည် 27cm
ခါး 83-85cm များအတွက် XL tile အရှည် 27cm
ခါး 86-90cm များအတွက် XXL tile အရှည် 27cm
အားကစားဒူးခေါင်းများသဘာဝ ၀ ါးမီးသွေးထည် Knee Brace KS-01
အခြေခံအချက်အလက်များမော်ဒယ်နံပါတ်:KS-01အထူ - အလယ်အလတ်အင်္ဂါရပ် - နွေးထွေးစွာဖြင့်သက်တောင့်သက်သာရှိရှိသက်တောင့်သက်သာရှိစေအသက်အရွယ်အုပ်စု - အရွယ်ရောက်သူများအတွက်ပစ္စည်း - အခြား၊ အရည်အသွေးမြင့်သော ၀ ါးထည်အမျိုးအစား - ဒူးထောက်အထောက်အပံ့အထုပ် - Opp Bag MOQ: 10pcs ရာထူးအမည် - အကာအကွယ်ဒူးထောက်လက်မှတ် - CE, FDA, ISO9001, ISO13485 အရွယ်အစား - ညှိနိုင်သောထုတ်ကုန်အမည်: ဒူးထောက်အပိုဆောင်းအချက်အလက်များထုပ်ပိုးမှု - တစ်ယူနစ် / စုပ်အိတ်ထုတ်လုပ်မှု - တစ်လလျှင် ၅၀၀၀၀ အပိုင်းအစ / သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး - သမုဒ္ဒရာ၊ မြေ၊ လေ၊ မူရင်းနေရာ - Hebei, China (Mainland) ထောက်ပံ့ရေးစွမ်းရည် - 50000pieces / ...
နောက်သို့ Elastic ခါးပတ်ကြိုးများ WS-01
ရင်ဘတ်, Abdomen Postoperative ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကိုကူညီ
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်လျင်မြန်စွာအသေးစိတ်ဖော်ပြပါမူရင်းနေရာ - တရုတ်ပုံစံနံပါတ် - SB-10 ကုန်ပစ္စည်းအမည်: အားကစားခါးကိုညှပ်ရန်အရာ - ခါးနောက်ခံကာကွယ်မှုပစ္စည်း - elastic အထည်အရောင် - အပြာရောင် MOQ: 1pcs လျှောက်လွှာ: အားကစားကြံ့ခိုင်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းခါးမှသင်တန်းပေးသူပို့ချိန် - ၇-၁၅ ရက်အရွယ်အစား : S-XL ငွေပေးချေမှု: Paypal.western Union.TT ။ ကုန်သွယ်ရေးအာမခံဝန်ဆောင်မှု: ၂၄ နာရီအလေးချိန် - 200 ဂရမ် is_customized: ဟုတ်သည်။ ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်ပို့ဆောင်ခြင်းကြာချိန် - အရေအတွက် (အပိုင်းအစများ) ၁ ...
အရည်အသွေးမြင့် Custom Logo သီးသန့်တံဆိပ် Back Brace Support Belt PC-02
-The ကိုယ်ဟန်အနေအထားသတ္တုအထိမ်းအချုပ်ပါးလွှာနှင့်သတိပညာရှိသည်။ ၎င်းသည်ရှပ်အင်္ကျီ၏အောက်တွင်အလွယ်တကူတပ်ဆင်နိုင်ပြီးအမျိုးမျိုးသောချိန်ညှိမှုများနှင့်လှုပ်ရှားမှုများတွင်အသုံးပြုရန်သင့်တော်သည်။
နေရပ်လိပ်စာ - အခန်း ၂၀၀၇၊ နံပါတ် A8၊ ဇုန်အေ၊ Konggang နိုင်ငံတကာဌာနချုပ်အခြေစိုက်စခန်း၊ Dongli ခရိုင်၊ Tianjin, China